Nahazo tablette 140 sy routeurs WIFI - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nisy lanonana tsotra fa manan-danja notontosaina ka nanomezana tablette miisa 140 sy routeurs wifi avy any amin' ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) ho an' ireo CLAC (Centre de Lecture et d'Animation Culturelle) manerana ny nosy, no natao ny alakamisy 22 novembre 2018. Teny amin' ny birao rezionalin' ny Francophonie Antaninarenina no natao ny lanonana. Nanao sonia ny fanomezana ny Ministry ny kolontsaina sy ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, Johasy Eléonore sy ny Ambasadaoron' ny Frankaofonina eto Madagasikara, Malik Sarr.
Ilain’ny Clac tokoa ireo fitaovana azony tamin’ny Oif ny alakamisy 22 novambra lasa teo. Entiny hampandehanana ny asa fanaony. Marihina fa miisa 27 ireo Clac manerana ny nosy, na an-tanan-dehibe na ambanivohitra, ary samy nahazo izao fitaovana izao avokoa. ny alakamisy 22 novambra lasa teo. « Fanamafisana ny fitaovana na koa fanatsarana izany fitaovana ampiasain’ny Clac izao tolotra nataon’ny Oif izao » hoy ny Minisitry ny kolontsaina. « Tsy ho lavitra andriana intsony ny any ambanivohitra any raha ny resaka kolontsaina no resahana noho ny fananana ireo fitaovana ireo. » Manamora ny fivoizana fanabeazana any amin’ny toerana misy azy, indrindra koa ho an’ireo any ambanivohitra rehetra any. Manome fanabeazana ho an’ireo tantsaha any ambanivohitra rehetra any. Tsy hoe rehefa monina any ambanivohitra any dia tsy tokony hanana anjara fanabeazana amin'ny kolontsaina na koa amin’ny fahalalana. Mampivoatra ny mahaolombelona izany ka tsy maintsy atao satria fampandrosoana no ilaina. Marobe tokoa ny fahalalana mety ho azo sy trandrahana avy amin’ireo fitaovana nomen’ny Oif ireto. Ilain’ireo any amin’ny faritra rehetra any izany fitaovana izany satria liana ihany koa izy ireo amin’ny fandrosoana. Ahafahan’izy ireo mitondra hevi-baovao eo amin’ny fampandrosoana sy ny fiainam-piaraha-monina ary indrindra hanatsarany ny fifandraisany amin’ny ankohonany sy ny fianakaviany.
Raha iverenana moa ny andraikitry ny Clac dia tsy resaka famakiam-boky fotsiny ihany fa eo ihany koa ny fanetsiketsehana ara-kolontsaina ny any amin’ny faritra rehetra any. Miainga avy any an-toerana izany fa tsy midina avy aty amin’ny Cmdelac. Izany hoe mametraka an-kalalahana azy ireo hisafidy ny fahalalana sy ny kolontsaina izay tian’izy ireo voizina fa tsy ny aty amin’ny minisitera na koa ny ao amin’ny Cmdelac.
Zavatra be dia be no hita ao anatin’ireo tablette ireo ary sahaza ny fari-pahalalana sy fari-pahaizan’ny tsirairay. Na dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra aza dia azo atoro ny fomba fikitikitihina ireo fitaovana dia afaka mahita izay zavatra tadiavina ao. Afaka mijery film, afaka mihaino hira. Betsaka ny zavatra hita ao anatin’ireo tablette ireo, misy sahaza ny ankizy kely ho an’ny olon-dehibe… Rehefa vita ny fandaminana dia hozaraina any amin’ny Clac izy ireo. « Tsy maintsy atao configuration alohan’ny hanapariahana azy any amin’ireo Clac no mampianatra ireo animateur any amin’ny Clac » hoy Victoire tale jeneralin’ny Cmdelac. Satria izy ireo no hikirakira sy hanoro ireo olona any amin’ny toerana misy azy tsirairay avy.